पढ्ने समय: 8 मिनेट केही दिनको लागि टाढा रही सोच? के पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न केही दिन यात्राको योजना बारे? फ्रान्सेली रेल छिटो हो, सजिलो, र फ्रान्समा वरिपरि जानको लागि इको-मैत्री तरीका. बचत एक ट्रेन संग, तपाईं मिनेटमा बुक गर्न सक्षम हुनुहुनेछ…
पढ्ने समय:5मिनेट कसले गर्दा सम्भव पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ छैन, विशेष गरी फुर्सदमा? यात्रा महंगा हुन सक्छ, तर बचत एक ट्रेन आफ्नो रेल टिकट खरीद र हाम्रो मद्दत संग योजना द्वारा, तपाईं लागत तल ल्याउन सक्छ. यी संग यात्रा गर्दा पैसा बचत 10 सुझावहरूको…